साथीहरूसँग घडी 15
के तपाईं मलाई आगो वा ज्वाला को प्रकृति बारे केहि भन्न सक्नुहुन्छ? यो संधै सबैभन्दा रहस्यमय कुरा देखिन्छ। मैले वैज्ञानिक पुस्तकहरूबाट कुनै संतोषजनक जानकारी प्राप्त गर्न सक्दिनँ।
आगो भनेको ज्वालाको आत्मा हो। ज्वाला आगोको शरीर हो।
सबै शरीरमा आगो सक्रिय सक्रिय ऊर्जा ड्राइभ तत्व हो। आगो बिना सबै शरीर अस्थिर स्थिर थियो - एक असम्भव। आगो त्यो हो जुन प्रत्येक शरीरमा हुन्छ जुन शरीरको कणलाई परिवर्तन गर्न बाध्य गर्दछ। मानिसमा आगोले विभिन्न तरिकाले कार्य गर्दछ। आगोको तत्व सास र रगतमा प्रवेश गर्दछ। यसले फोहोर टिश्युहरू जलाउँछ जुन रगतले ओगटेको छ र फोक्स, फोक्सो र आन्द्रा नहर जस्ता मलमूत्र माध्यमहरू मार्फत हटाइएको छ। आगोले सूक्ष्म, आणविक, फार्मको शरीरलाई परिवर्तनको कारण दिन्छ। यो निरन्तर परिवर्तनले शरीरमा तातो उत्पादन गर्दछ। आगो र अक्सिजन, स्थूल शरीर जहाँ आगो प्रकट हुन्छ, इच्छालाई उत्तेजित गर्दछ, जोश र क्रोधको प्रकोप पैदा गर्दछ, जसले सूक्ष्म शरीरलाई जलाउँछ र स्नायु शक्ति प्रयोग गर्दछ। आगोको यस्तो कार्य प्राथमिक हो र प्राकृतिक आवेगको अनुसार।
त्यहाँ अर्को आगो छ, जसलाई कसैलाई अल्केमिकल आगो भनेर चिनिन्छ। वास्तविक अल्केमिकल आगो भनेको विचारमा रहेको दिमागको आगो हो, जसले मौलिक आगो र नियन्त्रणहरूको प्रतिरोध गर्दछ र तिनीहरूलाई दिमागद्वारा निर्धारण गरे अनुरुप बौद्धिक डिजाईनको अनुरूप बाध्य पार्दछ; जबकि, जब मानिसद्वारा अनियन्त्रित हुन्छ, इच्छा, उत्कटता र क्रोधको मूल आगोलाई ब्रह्माण्डको दिमागले नियन्त्रणमा राख्छ, त्यो हो, प्रकृतिमा रहेको मन, जसलाई व्यक्तिगतकरण गरिएको छैन - जसलाई भगवान, प्रकृति, वा प्रकृति मार्फत कार्य गर्ने भगवान भनिन्छ। मानिस, एक व्यक्तिगत दिमागको रूपमा, मौलिक आगोमा कार्य गर्दछ र तिनीहरूलाई बौद्धिक डिजाइनको अनुरूप बाध्य पार्दछ, उनीहरूलाई नयाँ संयोजनहरूमा प्रवेश गराउँछ र प्राथमिक अग्निहरूको संयोजनको परिणाम सोच्दछ। विचार र विचारको माध्यमले शरीरको आगो र तत्व तत्वहरू अदृश्य संसारहरूमा दिइन्छ। अदृश्य संसारमा विचारहरूको यी रूपहरूले सकल पदार्थ बाध्य पार्छ आफैलाई ढाँचामा रूपान्तरण गर्न।
आगो र ज्वाला को केहि विशेषताहरु हुन् कि ती तातो छन्, कि एकै पल्ट को लागी कहिल्यै एक समान रहन्छ, कि तिनीहरू हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि अन्य घटनाहरु भन्दा फरक छन्, कि तिनीहरूले प्रकाश दिन्छ, कि तिनीहरूले धुवाँ उत्पादन गर्छन्, कि तिनीहरूले रूप परिवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई खरानीमा घटाएर, कि आगोको माध्यमबाट, यसको शरीर, आगो अचानक हराउने बित्तिकै देखा पर्दछ, जुन तिनीहरू सँधै माथि जान्छन् र औंल्याइन्छन्। आगो जुन हामीले देख्छौं त्यो अवस्था हो जसमा शरीरको आत्मा, घोर पदार्थले दासत्वमा राखिएको, स्वतन्त्र हुन्छ र आफ्नो आदिम प्राथमिक अवस्थामा फर्कन्छ। यसको आफ्नै विमानमा, आफ्नै संसारमा आगो स्वतन्त्र र सक्रिय छ, तर यो अभिव्यक्तिद्वारा प्रकट हुने क्रममा आगोको कार्य घटाइन्छ र नियन्त्रित हुन्छ र अन्ततः आत्मा हो जुन शरीरको भित्र राखिन्छ जुन आगो हो। सबै शरीरमा आत्मा। घोर पदार्थले बाँधिएको आगोलाई हामी सुप्त आगो भन्न सक्छौं। यो सुप्त आगो प्रकृतिको सबै राज्यहरु मा छ। यद्यपि पछिल्लो आगो एकै राज्यका अन्य विभागहरूको भन्दा प्रत्येक राज्यका केही विभागहरूमा बढी सक्रिय हुन्छ। यो खनिजमा चकमक र सल्फरद्वारा, तरकारी राज्यमा कडा काठ र परालले र जनावरहरूको शरीरमा बोसो र छालाद्वारा देखाउँदछ। लेटेन्ट आगो केही तरल पदार्थहरूमा पनि हुन्छ, जस्तै तेल। एक ज्वलनशील शरीरको लागि सक्रिय आगोको उपस्थिति मात्र आवाश्यक हुन्छ र यसको जेलबाट सुप्तलाई मुक्त गर्न। तुरुन्तै चिनिने बित्तिकै, अव्यक्त आगो एक क्षणको लागि देख्न सकिन्छ, त्यसपछि अदृश्य संसारमा जान्छ जुनबाट यो आयो।
फायर चार तत्वहरू मध्ये एक हो जुन सबै जादूगरहरूलाई ज्ञात छ। आगो तत्त्वहरूको सब भन्दा तन्त्रमन्त्र हो। आगो, वायु, पानी र पृथ्वी भनेर चिनिने कुनै पनि तत्त्वको आँखाले देख्न मिल्दैन, त्यस तत्वको ग्रोसेस्ट अवस्था बाहेक। त्यसैले हामी केवल सबैभन्दा कम चरणहरू वा तत्त्वहरूको पक्षहरू देख्छौं जुन हामी सामान्यतया पृथ्वी, पानी, हावा र आगोको रूपमा बोल्दछौं। प्रत्येक चार तत्वहरु भौतिक पदार्थको निर्माणमा आवश्यक छ, र प्रत्येक तत्वहरु लाई एक अर्काको सम्बन्ध मा प्रतिनिधित्व गर्दछ। भौतिक पदार्थको प्रत्येक कणले चार तत्वहरूलाई निश्चित अनुपातमा समाहित गर्दछ, प्रत्येक चार तत्वहरु संयोजनको बिच्छेद हुने बित्तिकै आफ्नो तत्त्व अवस्थामा फर्किन्छ। आगो त्यो हो जुन सामान्यतया संयोजन बिच्छेद गर्दछ र संयोजनमा प्रवेश गरेका तत्त्वहरूलाई उनीहरूको मूल अवस्थामा फर्काउँदछ। जब आगोलाई निकालेको हुन्छ, यो ज्वालामुखी निकायहरूमा मुख्य कारक हुन्छ, यो बितेको मात्र देखिन्छ। बितेर जाँदा यसले तत्त्वहरू हावा, पानी र पृथ्वीलाई तिनीहरूका धेरै स्रोतहरूमा फर्काउँदछ। फर्किने हावा र पानी धुवाँमा देखिन्छ। धुवाँको त्यो अ air्ग जुन हावा हो र जुन सामान्य रूपमा धुँवाको शान्त आवाजमा देखिएको छ, चाँडै नै अदृश्य हुन्छ। पानीको धुवाँको त्यो अंश हावामा निलम्बन गरिएको तत्त्वको पानीमा फर्कन्छ, र जुन अदृश्य हुन्छ। शेष भाग मात्र तत्त्व पृथ्वीको ग्रससेस्ट हिस्सा हो जुन कालिलो र खरानीमा छ। अव्यक्त आगो बाहेक त्यहाँ रासायनिक आगो रहेको छ जुन रसायनको सम्पर्कमा ल्याइएको केही रसायनहरूको रगतले अवशोषित अक्सिजनद्वारा र खाद्य पदार्थको पाचनको कारण फर्मेनहरूद्वारा संक्रमित कार्यद्वारा देखाइन्छ। त्यसोभए त्यहाँ अल्केमिकल आगो हुन्छ जुन विचारले उत्पन्न गर्छ। विचारको अल्केमिकल आगोको कार्यले समग्र इच्छालाई उच्च इच्छाको क्रममा परिवर्तन गर्न निम्त्याउँदछ, जुन फेरि परिष्कृत हुन्छ र आत्मिक आकांक्षामा डिप्लिमेटेड हुन्छ, यी सबै विचारको कीमिक आगोले गर्छन्। तब त्यहाँ आत्मिक आगो हुन्छ जसले सबै कार्यहरू र विचारहरूलाई ज्ञानमा कम गर्दछ र अमर आत्मिक शरीरको निर्माण गर्दछ, जुन आत्मिक अग्नि-शरीरले प्रतीकको रूपमा लिन सक्दछ।
शहरको बिभिन्न भागहरूबाट एकैसाथ वसन्त देखिन्थ्यो जस्तो प्ररी आग र आगो जस्तै महान कन्फ्ल्यागरेसनको कारण के हो, र सहज दहन के हो।
त्यहाँ कन्फ्लगरेसनका धेरै सहयोगी कारणहरू छन्, तर यी धेरै कारणहरू कन्फ्लग्रेशनको तत्काल कारणमा प्रतिनिधित्व हुन्छन् जुन ज्वाला देखा पर्नु अघि आगोको तत्त्वको उपस्थिति हो। यो बुझ्नु पर्छ कि आगो तत्व तत्वको रूपमा अन्य तत्वहरूसँग, फायरको प्लेनमा वा अन्य विमानहरूमा संयोजन गर्न सक्षम छ। बिभिन्न तत्वहरूको संयोजनले हामी निश्चित परिणामहरू पाउँछौं। जब फायर-एलिमेन्ट ठूलो शक्तिमा उपस्थित हुन्छ यसले उपस्थित अन्य तत्त्वहरूलाई हावी पार्छ र यसलाई आफ्नो अत्यधिक शक्तिले उपस्थितिद्वारा प्रज्वलन गर्न बाध्य पार्छ। अग्नि-तत्वको उपस्थितिले छिमेकी निकायहरूमा आगो उब्जाउँछ र संक्रमणकालीन ज्वालामार्फत कैद गरिएको आगो-तत्त्व आफ्नो मूल स्रोतमा फर्कन्छ। उफ्रिने ज्वाला आगोको द्वारा प्रयोग गरिन्छ जसले यसलाई ज्वालाको माध्यमबाट संसारमा प्रवेश गर्न सिकाउँदछ। जब आगो तत्वले वातावरणलाई पर्याप्त बलमा हावी गर्दछ यसले सबै ज्वलनशील पदार्थहरूमा कार्य गर्दछ; त्यसो भए घर्षण जस्ता merest उत्तेजनाले, यस कुराको ज्वालामा फैलिन्छ। प्रेरी वा ज fire्गलमा हुने आगलागीहरू यात्रीहरूको क्याम्प आगोबाट वा सूर्यास्तको घामको किरणले हुन सक्छ र इन्सेन्डिअरिज्म एउटा ठूलो शहरको जलेको कारण हुन सक्छ, तर यी जहिले पनि कुनै पनि कारणको मुख्य कारण हुँदैनन्। धेरैले याद गरे होलान कि धेरै अनुकूल परिस्थितिमा आगो निर्माण गर्ने प्रयास पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ, जबकि, बत्तीमा चम्किरहेको मेल स्टिक फाल्दा वा ठूलो भवनको खुला भागमा जहाँ केही पनि देखिदैन। वर्तमानमा सजिलै जलाउन सकिन्छ, तर आगो चम्कने मैच स्टिकले ईन्ग्रेन्डेड भएको छ र यति छिटो फैलिएको छ कि यसले सम्पूर्ण भवनलाई आगोमा जलाइदिएको छ, यद्यपि यसलाई बचाउनको लागि ठूलो प्रयास गरिएको हुनसक्दछ। कन्फ्लगरेसन जसले महान शहरहरू खान्छन् मुख्यतया त्यस्तो अवस्थामा आगो तत्वको उपस्थितिको कारणले हुन्छन्, यद्यपि अन्य धेरै योगदानकर्ता कारणहरू हुन सक्छन्।
सहज दहन भनिन्छ अक्सिजनको साथ दहनशील पदार्थको द्रुत एकजुट हुनु। तर मुख्यतया परस्पर विरोधी ज्वलनशील पदार्थको तयारीको कारण हो जुन आगो तत्वलाई आकर्षित गर्दछ। तसर्थ, तेल र रगजस्ता दुई ज्वलनशील पदार्थहरू बीचको घर्षण पछि हावामा भएको अक्सिजनसँग पदार्थको एकजुट हुँदा; यसले फायर-एलिमेन्ट उत्पन्न गर्दछ, जसले सामग्रीलाई ज्वालामा शुरू गर्दछ।
सुन, तांबे र चाँदीको रूपमा जस्ता जस्ता धातुहरू कसरी छन्?
त्यहाँ सात धातुहरु छन्, जसलाई कहिले काहिँ पवित्र धातुहरु भनिन्छ। यी मध्ये प्रत्येक उपजीव र कैद गरिएको बल, प्रकाश वा गुणस्तर हो जुन प्रकाश को सात निकायहरु मध्ये एक बाट उत्पन्न हुन्छ जुन हामी अन्तरिक्ष मा देख्छौं र ग्रहहरु लाई कल गर्दछौं। बल, वा प्रकाश, वा गुण, ती प्रत्येक शरीर को जसलाई हामी ग्रहहरु भन्छौं पृथ्वी द्वारा यसको चन्द्रमा संग आकर्षित हुन्छ। यी बलहरु जीवित छन् र तत्वहरु वा ग्रहहरुको मौलिक आत्माहरु भनिन्छ। पृथ्वी आफ्नो चन्द्रमा संग मौलिक शक्तिहरु लाई शरीर र रूप दिन्छ। धातुहरु सात चरण वा डिग्री को प्रतिनिधित्व गर्दछ जसको माध्यम बाट मौलिक सेनाहरु लाई खनिज साम्राज्य मा पारित हुनु भन्दा पहिले उनीहरु को अलग इकाई हुन सक्छ र भौतिक प्रकृति को उच्च राज्यहरुमा पास हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै प्रयोगहरु छन् जसमा सात धातुहरु लाई राख्न सकिन्छ। उपचार प्रभाव र रोगहरु को उपयोग वा धातुहरु को दुरुपयोग को बारे मा ल्याउन सक्छ। धातुहरु लाई जीवन दिने साथै मृत्यु को सामना गर्ने गुणहरु छन्। या त यिनीहरु बाट उत्पन्न हुन सक्छ, होशपूर्वक वा बेहोश, जब केहि शर्तहरु प्रबल हुन्छ। यो धातुहरु को प्रगति को क्रम र उनीहरु को समान गुणहरु को आदेश दिन को लागी पेडन्टिक हुनेछ, भले ही हामी तथ्यहरु को कब्जा मा थियौं, किनभने, जबकि धातुहरु को माध्यम बाट काम गर्ने मौलिक शक्तिहरु को एक राज्य देखि राज्य को क्रमबद्ध प्रगति हो, यो आदेश सबै व्यक्तिहरु द्वारा समान रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन; के एक को लाभ को लागी लागू हुन्छ अर्को को लागी विनाशकारी हुनेछ। प्रत्येक व्यक्ति, जे होस् उहि योजना अनुसार बनेको हो, उसको रचना मा केहि गुणहरु छन् जुन धातुहरु को मौलिक आत्माहरु संग मेल खान्छ; यी मध्ये केहि लाभदायक छन्, अन्य हानिकारक छन्। सामान्यतया, तथापि, सुन धातुहरु को बीच विकास को उच्चतम चरण को प्रतिनिधित्व गर्दछ। सात धातुहरु टिन, सुन, पारा, तामा, सीसा चाँदी र फलाम हुन्। यो गणना प्रगति को क्रम, वा उल्टो को रूप मा लिनु हुदैन।
विगत युगहरूमा प्राय जसो प्रयोग भइरहने धातुहरू हालसालै सबैभन्दा सामान्य हुँदैनन्। सुनलाई हामी सातवटा धातुहरू मध्ये सबैभन्दा मूल्यवान ठान्छौं, यद्यपि यो सबैभन्दा उपयोगी छैन। हामी आज सजिलै सुन संगै गर्न सक्छौं हामी फलाम संग गर्न सक्छन् भन्दा। धातुहरू मध्ये, फलाम हाम्रो सभ्यताको लागि सबै भन्दा आवश्यक छ, किनकि यसले औद्योगिक जीवनको सबै चरणहरूमा प्रवेश गर्दछ, जस्तै उच्च संरचनाहरू निर्माण, भवन निर्माण र स्टीमशिपको प्रयोग, रेलमार्ग, इन्जिन, उपकरण, घरेलु भाँडाहरू र फर्नीचरको। । यो सजावटी उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, र यो औषधीमा मूल्यवान र आवश्यक छ। अन्य सभ्यताहरू तिनीहरूको विभिन्न कालखण्डहरूमा चलेका छन् जुन सुनौलो, चाँदीको कांस्य (वा तामा) र फलाम युगका रूपमा परिचित छन्। पृथ्वीका मानिसहरु प्रायः बोलेका कुराहरु फलामको युगमा छन्। यो एक आयु हो जुन कडा छ र जुन अरू भन्दा कुनै छिटो परिवर्तन हुन्छ। अब हामी के गर्छौं त्यसले अरू कुनै उमेर भन्दा बढी सकारात्मक असर गर्छ किनकि कुनै पनि कुराको भन्दा फलामको युगमा चीजहरू बढ्ता चाँडो सार्दछन्। कारणहरू पछि गएका छन् उनीहरूको नतीजा फलाममा अधिक चाँडो कुनै अन्य युगको तुलनामा। कारणहरू जुन हामीले अब सेटअप गर्यौं पछिल्लो युगमा अन्त हुनेछ। अनुसरण गर्ने युग भनेको सुनौलो युग हो। अमेरिकामा, जहाँ नयाँ रेस बनेको छ, हामीले यसमा प्रवेश गरिसकेका छौं।
यहाँ गणना गरिएको सातवटा धातुहरू आधुनिक विज्ञान द्वारा पोषित गरिएको र टेबुल गरिएका सत्तरी विषम तत्वहरूको बीचमा गणना गरिएको छ। उनीहरू कसरी गठन हुन्छन् भनेर हामीले भनिरहेका छौ कि अन्तरिक्षमा सातवटा शरीरबाट आएका बलहरू, बत्तीहरू वा गुणहरू, जसलाई ग्रहहरू भनिन्छ, पृथ्वीले आकर्षित गर्छ। पृथ्वीले चुम्बकीय आकर्षण स्थापित गर्दछ र विद्यमान अवस्थाका कारण त्यहाँ यी शक्तिहरू बृद्धि हुन्छन् जुन क्रमशः उत्प्रेरणा द्वारा निर्माण गरिन्छ, चुम्बकीय बेल्ट भित्र कणमा कण बनेर बललाई आकर्षित गर्दछ। सातवटा शक्तिहरू मध्ये प्रत्येकलाई यसको विशेष र and र गुणले र कणहरू सँगै छुट्टिँदा ज्ञात छ। यो कुनै पनि धातुको गठनको लागि लिने समय प्रचलित अवस्थामा निर्भर गर्दछ, किनकि सुन एकदमै कम समयमा उत्पादन गर्न सक्दछ जब आवश्यक पर्ने सबै अवस्थाहरू उपस्थित हुन्छन्।